नेपाली नेताले सिक्नै पर्ने चिनियाँ राष्ट्रपतिकाे याे कार्यशैली ! (हेर्नुस् भिडियाे) – Nepal Journal
नेपाली नेताले सिक्नै पर्ने चिनियाँ राष्ट्रपतिकाे याे कार्यशैली ! (हेर्नुस् भिडियाे)
Posted By: Nepal Journal March 13, 2018 | २९ फाल्गुन २०७४, मंगलवार १३:३३
एजेन्सी । नेपाली कतिपय नेताहरूका पैतृक सम्पति नभएपनि महंगाे गाडी र महंगा घडीमा देखिने गरेका छन् । नेताका छाेराछाेरी त कतिपय व्यापारीहरू वा शुभेच्छुकहरूले अाफूलार्इ महंगा एप्पल फाेन उपहार दिएकाे भन्दै सगाैरव सामाजिक सञ्जालमा फाेटाे नै अपलाेड गर्ने गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीहरू निशंकाेच व्यापारीहरूकाे घरमा बैठक बस्ने र भाेज खाने नेपाली सन्दर्भमा सामान्य घटना नै हुन् । कुनै महाेत्सवमा जाँदा व्यापारीहरूका उपहारले उनीहरूका सवार सवारी साधन भरिने गरेका छन् ।
तर यहाँ चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिङपिङले व्यापारीसँग गरेकाे व्यावहार नेपाली नेताहरूलार्इ सिक्न सक्ने पाठ हुनसक्छ । गत फेब्रवरीमा, चिनियाँ राष्ट्राध्यक्ष सी जिङपिङले चीनको सछ्वान प्रान्तको चानछी गाउँको भ्रमण गरेका थिए । यो राष्ट्राध्यक्ष सीको गरिबी निवारणसम्बन्धित भ्रमण थियो ।
भ्रमणको क्रममा सिले घरेलु उद्याेगबाट निर्मित जुत्ता बनाइने पसलहरूको अवलोकन गरेका थिए । त्यसक्रममा उक्त पसलेले एक जोडी जुत्ता अाफ्ना राष्ट्राध्यक्ष सीलाई उपहार स्वरूप प्रदान गर्न चाहेका थिए तर राष्ट्राध्यक्ष सीले सित्तैमा लिन मानेनन् । ती पसलेलाई जुत्ताकाे मूल्य साेधे र अाफू जुत्ता सित्तैमा लिन नसक्ने बताए ।
Be the first to comment on "नेपाली नेताले सिक्नै पर्ने चिनियाँ राष्ट्रपतिकाे याे कार्यशैली ! (हेर्नुस् भिडियाे)"